musha Africa Kamaru Usman Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yeNigerian akazvarwa MMA Fighter ine zita rekuti; "The Nigerian Nightmare".
Yedu vhezheni yeKamaru Usman Biography uye Yehucheche Nyaya inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Kufambira mberi kwaKamaru Usman kubva paUdiki kusvika kune Vakura
Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nyaya yehupenyu pamberi mukurumbira, mhuri yemhuri uye hupenyu hwake. Zvimwe zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma zvichakazivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva kubva pakusimuka kwake kubva pakunyangarika kusvika mukurumbira. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Kamaru Usman's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Kamaru Usman Wehucheche Nyaya - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Kutanga kubva, Kamarudeen "Kamaru" Usman akaberekwa musi we 11th waMarch 1987 kuAuchi, muEdo State, Nigeria. Akaberekerwa amai vanoita basa rekuita vana uye kuna baba vakashanda muNigerian Army.
Kamaru Usman seMwana
Nyika yekuAmerican neNigerian yenyika yeVatema dzinza nemidzi yeAfrica inotama kubva kumhuri yepakati-yemhuri kumashure uye akarererwa mutaundi rekumusha kwake kuAuchi, Edo nyika.
Kukura muAuchi pamwe chete nemunun'una wake, Mohammed uye hanzvadzi yechidiki, Kamaru akararama hupenyu hwemurombo.
Akafamba mamaira ekuchera mvura sevazhinji vemunharaunda metaundi rake uye akashanda semubatsiri papurazi remhuri yake.
Kurera muAuchi Kamaru akafamba kwemakiromita kuti anotora mvura sevanhu vazhinji vemunharaunda yokumusha kwake. Credits: AWSN.
Kamaru aive achiri mudiki baba vake pavakatamira kuUnited States kunodzidza kuti vave mukhemisi.
Pasina nguva refu, baba vaKamaru vakaunza mhuri yavo yese kuti vagare naye kuTexas apo murwi wekurwa aive akura 8.
Kugara muUSA yaive nyika nyowani yakashinga kuna Kamaru uyo ​​aive nemutemo wakashata weChirungu. Zvakangodaro, aikurumidza kujairana netsika dzeAmerica zvichitevera kunyoresa kwake kuchikoro.
Mufananidzo wechidiki Kamaru (kurudyi-kurudyi) naamai vake, munin'ina mukoma Mohammed (kuruboshwe kuruboshwe) uye hanzvadzi. Credits: Instagram.
Kamaru Usman Dzidzo:
Mamiriro ekudzidza aKamaru anosanganisira zvidzidzo zvake kuBowie High School muArlington, Texas. Ndichiri pachikoro Kamaru akatambudzika kuti azvimisikidza mumutambo wenhabvu wechikoro uye munguva pfupi akasiya mushure mekukuvara.
Kufamba paKamaru akaedza kukwikwidza zvinoenderana nezano rakaitwa nemudzidzisi wake wechikoro chepamusoro-soro panguva iyoyo.
Kunyangwe Kamaru aigara achirohwa nemusikana panguva yake yekutanga kurovedzwa mumutambo, haana kudziviswa asi akashanda nesimba kuti ave nani.
Nekudaro, akadhonza chinyorwa chinonakidza che53-3 mukurwira paBuyie High Chikoro muArlington, Texas asati aenderera mberi kuenda kuWilliam Penn University kwaakazova mukwikwidzi wenyika yeNAIA.
Kamaru akapedza chikoro chesekondari aine nhoroondo yewrestling ye53-3 asati aenderera mberi kukoreji.
Kwakazotevera kuita kwedzidzo akaona Kamaru achiendeswa kuYunivhesiti yeNebraska kuKearney kwaakawana NCAA Division II All-American rukudzo uye akabatsira timu yechikoro yekurwa kuti itore mukombe wayo wekutanga-wenguva dzose mu2008.
Akaenderera mberi kuhwina mukombe weNCAA Division II yenyika muna 2010 uye aive nhengo yeUniversity World Team ye freestyle wrestling mu2010.
Kamaru Usman Biography - Hupenyu hwepakutanga Mukurwisa Mitambo:
Kunyange zvazvo Kamaru akanga ari mutsigiri wakanaka kwazvo, mikana yake yekuita zvishoma kubva mumutambo yaiva shoma. Somugumisiro, akazvipira kuva mumiriri weMMA mushure mekunge ataurwa nezvemaitiro emabasa muMMA nevekare veUFC light lightweight champion, Rashad Evans.
Aine chishuwo chakasimba, Kamaru akaita MMA yake yekutanga mukumanikidza David Glover munaNovember 2012 paRFA 5 kuNebraska. Zvisinei, kurwisana kwechipiri kwakaratidza kuti ndiye Kamaru akaipa pane akamborarama apo akanyora kurasikirwa kwake kokutanga uye kurasikirwa chete kuna Jose Caceres.
Kamaru Usman akanyora kukanganisa kwake kokutanga uye chete kurasikirwa panguva yechipiri MMA kurwisana naJose Caceres. Credits: Sherdog.
Kamaru Usman Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Asingaregi uye asingatyi, Kamaru akanamira neMMA uye akafambira mberi kubva pakurwira kumatunhu kusimudzira kuenda ku "The Ultimate Fighter" inozivikanwawo senzvimbo yekuberekesa yeUFC varwi.
Paaive kumakwikwi eUltimate Fighter, Kamaru akanyora kukunda pakukunda uye akazvisimbisa semumwe wevateveri vanodiwa.
Pamusoro pekurwa kwake mumakwikwi, Kamaru akakunda Hayder Hassan muna Chikunguru 2015 kutora kondirakiti yematanhatu neUFC.
Kamaru Usman akakunda Hayder Hassan mu2015 kuti aite chibvumirano chechitanhatu neUFC. Credits: Elbow Ropa.
Kamaru Usman Biography - Simuka Mukurumbira Nhau:
Mumakore matatu akatevera, Kamaru akatonga iyo UFC nekubvisa kukunda kusingazivikanwe. Fomu inoshamisa yaKamaru yakaburitswa kunze kwechishuwo chake chakakunda kuhwina UFC Welterweight Championship zita riri kubatwa naTyron Woodley.
Nekudaro akarwisa zvishoma nezvishoma nzira yake nekurova makwikwi kuti pakupedzisira asangane naTyron Woodley musi wa2 Kurume 2019 muchiitiko chikuru cheUFC 235.
Kamaru akakunda kurwa nekutonga kwakafanana. Nekukunda, Kamaru akave mutsva weUFC Welterweight Champion pamwe neyekutanga Africa yekuzvarwa UFC shasha. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Kamaru akava mutsva wekuAfrica akaberekerwa UFC mushure mokukundwa kweTyron Woodley kuti akunde musoro weUFC Welterweight Championship. Credits: CBS Sports.
Kamaru Usman Wife Uye Vana:
Kamaru achiri kuzoroora tinokuunzira ruzivo nezve yake yekufambidzana nhoroondo uye azvino hukama hwehukama.
Kutanga, murwi weMMA haazivikanwe kuti akambofambidzana nemukadzi chero upi zvake asati asangana nemusikana wake wekuBrazil nemwana mucheche.
Kamaru Usman's Brazillian musikana uye mwana amai. Credits: Paragon.
Musikana anotaura chiPutukezi anga ari muhukama naKamaru kwemakore uye vane mwanasikana ane makore mana ekuberekwa pamwechete anonzi Samira Usman.
Kamaru anodada nemwanasikana wake wepasirose uye haamire kumuratidzira pane ake enhau enhau.
Kamaru Usman aine musikana wake nemwanasikana wavo, Samira Usman. Credits: Paragon.
Imba yakanaka kwazvo imba yeKamaru.
Kamaru Usman Hupenyu Hwemhuri:
Kamaru akaberekerwa mumhuri ye5. Tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri yake.
Nezve Kamaru Usman baba:
Baba vaKamaru musoja aishandira muNigerian Army uye ane chekuita muMasoja eUS. Anonzi haana kumanikidza Kamaru kuti ave mutambi. Kunyange zvakadaro, aida kuti ave mutambi webaseball.
Nezve Kamaru Usman amai:
Amai vaKamaru vaigadzira imba vaimuchengeta zvakanaka nehama dzake. Pakutanga haana kubvumidza sarudzo yaKamaru yebasa muhondo yehunyanzvi asi ikozvino ane zvikonzero zvekudada naye.
Nezve Kamaru Usman siblings:
Kamaru ane vanin'ina vatatu vaakakura navo. Ivo vanosanganisira munin'ina wake Mohammed Usman uye imwe hama iyo zvishoma inozivikanwa nezvayo. Uye zvakare, hapana zvakawanda zvinozivikanwa nezve hanzvadzi yake diki.
Mohammed Usman murwi weMMA senge mukoma wake mukuru. Anorwa mune rimwe divi uye haadzidzise naKamaru. Kunyange zvakadaro, hapana ropa rakaipa pakati pavo.
(Kubva kunaRR) Mohammed, Kamaru, amai vake nehanzvadzi duku. Credits: Instagram.
Nezve Kamaru Usman Relatives:
Kamaru achiri kutaura nezve nhengo dzemhuri yake yakatambanudzwa. Uye hapana akamboziva naye kusvika parizvino.
Kunyange zvakadaro, hapana kuramba chokwadi chekuti ana sekuru nasekuru, babamunini, babamunini, vanatete, vazukuru uye vazukuru vanozvikudza nekureba kwaakasvika muMMA.
Kamaru Usman Hupenyu hweMunhu:
Kamaru Usman haana tattoos. Izvi zvinomuita mumwe wevashoma kwazvo MMA fighters vasina unyanzvi pamitumbi yavo.
Anotaura mutauro wakanaka weChirungu uye ane rairo yakanaka yepidgin Chirungu. Kamaru anoshandisa iyo yekupedzisira kuti azive nemidzi yake yemhuri yeNigerian senge muvhidhiyo pazasi.
Murwi weMMA anoona kurwisana sechinhu chinokuvadza. Zvimwe zvinonakidza zvinosanganisira kutamba mitambo yemavhidhiyo uye kuveza.
Kamaru Usman Chokwadi:
Kamaru aimbozivikanwa se "Marty", zita raakapihwa nemudzidzisi wake wekurwa kuUniversity yeNebraska nekuti akaona zvichinetsa kudana "Kamaru". Saka Kamaru inozivikanwawo se "Marty anobva kuNebraska".
Akagara nhaka yezita rake rekudana “Nhamo yeNigerian” kubva kuNigerian-American yaimbova yebhola yebhola reAmerica inodzoka zvakare inonzi Christain Okoye. Uyu aimbova mutambi wemubhokisi anozvikudza naKamaru uye akamupa chikomborero kutakura zita rezita raakashandisa kutakura pakati pe1987 kusvika 1992.
Kamaru Usman ane ex-NFL nyeredzi uye aimbove "Iyo Nigerian Nightmare", Christian Okoye. Credits: TMZ.
Nezvechitendero chake, Kamaru anotsanangura seMuslim uyo anotenda mukuguma, Karma uye anotenda muna Mwari.
Kamaru Usman Biography Chokwadi - Vhidhiyo Pfupiso:
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Kamaru Usman Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!